तस्बिरमा हेर्नुहोस् ‘मुन्नी’को सुन्दरता ! – Online Nepal
June 26, 2020 234
हाँस्य टेली श्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ बाट एकाएक चर्चा कमाएकी मोडल हुन्- प्रियाना आचार्य ‘मुन्नी’ ।‘भद्रगोल’ हेर्न्र जो-कोहिको लागि सु-परिचित नाम हो- ‘मुन्नी’ ।उनी पछिल्लो समय प्रियाना भन्दा पनि ‘मुन्नी’ को उप-नामले भाइरल भएकी छिन् ।मुन्नी एक थिएटर कलाकार हुन् । उनका थुप्रै नाटक अभिनय गरेकी छिन् ।
उनले अहिले हाँस्य टेली श्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ कै टिमसँग ‘सक्किगोनि’ मा काम रहेकी छिन् । आखिर को हुन त ‘मुन्नी’ ? हाँस्य टेली श्रृङ्खला भद्रगोल’ मा एक मधेस कमिनिटीकी छोरीको भूमिका निर्भा गरेकी छिन् ।‘मुन्नी’ भनेको मधेसमा आफ्नो छोरीलाई मायाले भने गर्दछन । ‘मुन्नी’नामबाट उनले करोडौँ दर्शकको मन जित्न सफल भएकी छिन् । पछिल्लो समय उनको फ्यान फ्लोर निकै चुलिएको छ ।
उनी हाँस्य टेली श्रृङ्खला बाहेक म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गर्दछन् । उनले अभिनय गरेका भिडियो ‘सरिम लाउने’ ‘कालो कोठी’ लगायत गीतमा अभिनय गरेकी छिन् ।‘मुन्नी’ भने बित्तिकै ‘लजालु’ मधेस कमिनिटीको र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने मोडले सम्झिन छन् । उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भएकी हुन्छिन् सँगै उनको सुन्दरता र एक्टिंगको पनि चर्चा हुन्ने गरेको छ ।
Prevआश्रममै लुकेका भनिएका लिटिल बुद्ध जति पटक छापा मा’र्दापनि भेटिएनन् : के छ त्यस्तो शक्ति !
Nextआज देखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन
काठमाडौँमै बाढीको बितण्डा डुबे घर, सेना प्रहरी उद्धारमा घरै डुबाएपछि तनाबमा जनता (हेर्नुहोस भिडियो)